Kusemthethweni, iApple iya kuthi thaca i-iPhone yayo entsha ngoSeptemba 10 | Iindaba zeGajethi
Inkampani ephethe iapile yokulunywa ibhengeze kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo ukwaziswa okusemthethweni kweemodeli zayo ezintsha ze-iPhone kulo nyaka ka-2019. Ngokwenyani babhengeza lo msitho xa izimemo zifika kumajelo eendaba amenyiweyo kwaye kulo nyaka izakubanjelwa kumabala emidlalo eSteve Jobs ngaphakathi ukusuka eApple Park Nge-10 ezayo kaSeptemba 2019.
Inkampani iceba ukusungula izixhobo ezininzi kulo nyaka, ubuncinci kumahemuhemu abonisa njalo. Iimodeli ezintathu ze-iPhone ezichazwe njenge I-iPhone 11 kunye ne-iPhone 11 Pro. Inyani yile yokuba amarhe malunga nokunikezelwa kwezi modeli zintsha ahlala ehamba nezinye izixhobo zehardware ezinje ngeApple Watch entsha kunye neeAirPods.
Nokuba kunganjani na, nge-10 kaSeptemba siyakuphuma kumathandabuzo kwaye siyakubona ukuba yile nto basibonisa yona kumxholo ophambili obonakala ngathi ukhethekile kuba yeyesibini eza kwenzeka kwindawo leyo Umphathi omkhulu u-Steve Jobs, waphupha. Ngoku noTim Cook kwinkampani yenkampani, iinkonzo zithatha indima ebalulekileyo kwaye kulindeleke ukuba ukongeza kwi-iPhone uqobo qalisa iinkonzo zakho ezintsha IApple Arcade, egxile kwimidlalo yokusasaza kunye neApple TV + yomxholo odiyo.
Ngokwengqiqo unokubona iindaba kuluhlu lweMac kunye nezinye iimveliso, kodwa ezona ziphambili ziya kuba ziimodeli ezintsha ze-iPhone kunye nesoftware abayisebenzisayo. Iifowuni, ii-iPads, iiMac, iiApple Bukela, kunye neApple TV. Ngamafutshane, ngumboniso omkhulu wehardware ezahlukeneyo kunye namaqela okusungulwa kwesoftware, ke kuya kufuneka sinikele ingqalelo kwinto abayibonisa kule ntetho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » iapile » Kusemthethweni, iApple izakuveza i-iPhone yayo entsha ngoSeptemba 10
Ngaba uyayisebenzisa iCamScanner? Lumka kuba yongeza i-malware